Ogaden News Agency (ONA) – Q3xaad Taariikh Halganeedka CWXO – iyo Q2aad ee Dagaalkii CirJiidh
Q3xaad Taariikh Halganeedka CWXO – iyo Q2aad ee Dagaalkii CirJiidh
Qaybtii 1 aad ee barnaamijkan ayaan kaga soo sheekaynay qorshaha Hawlgalka Cirjiidh waxayna qaybtii 1aad inoogu joogtay:- Hawlgalkani in uu ahaa mid sidii loogu talagalay u fulay waxa uuna ka bilaabmay Tuulada Qamuda, iyadoo qorshihii 2aad loo qaybiyay ciidankii 6 madax (Hormo). Kadib waxaa lakala siiayay deegaanka ku wajahan oo ahaa degaan oomana ah ciduna ay ahayd ceel fadhiisi wakhtugun uu ahaa wakhti ay dayr bil kadhimantahay guga la soo dabamarayna uu san ahayn mid fiican jihooyunkii ay ahayd in loo socdo ayaa madax waliba u dhaqaajiyay:- Madaxa 1aad waxa uu uga dhaqaaqay goobtaasi Bari Ilaa koonfur bari waxa ay ahayd jihada hawlgalkiisa. Madaxa 2aad waxa uu uga dhaqaajiyay deegaanka Goglo ayuu ka jiidhay Koonfur. Madaxa 3aad waxa uu ka maray badhtanka deegaanka Goglo isagoo cagta siimariyay deegaanada Dhuure…, Buubi…& Waab… Madaxa 4aad ciidankani waxay isugu jireen 3 madax, waxaana qorshuhu ahaa in ay kawada maraan dhanka waqooyi deegaanka Goglo, kadibna laba madax oo wada socdaa ay u gudbaan galbeedka Ogaadeenia, barnaamijkeenan ayaan ku kala qeexi-doonaa waxii lagu danbeeyay iyo sidii uu u fashiliyay Hawlgalkii Cirjiidh Hawlgalkii ciidamada gumaysigu soo qaadeen ee Mulgeeta.
Kusoo dhawaada Qaybta 2aad ee Hawlgalkii Cirjiidh:
Markii ay qorsha shaxeedkii ku dul dhameyeen warqad iyo qalin dushood saraakiishii CWXO ee nala socotay iyagoo waliba wakhtigaasi xidhiidh dhaw la samaynayay Xarunta Dhexe ee JWXO, wuxuu taliskii wakhtigaasi fulinayay Hawlgalka Cirjiidh u soo dhaadhaceen gudaha ciidanka waxayna saacadu tilmaamaysay markaa 2:00 habeenimo (saqdhexe). Qaybin iyo diyaarin dabadeed abaara 4:00 subaxnimo waxyare kahor uun salaadii subax waxaanu akhrisanay quraan raatib ah iyo 21 bisin, waxuuna madax-waliba (Horinwalba) u jihaysatay dhankii qorshuhu ahaa. Anigu waxaan kamid ahaa labada madax ee ku jira badhtanka ciidanka.
Barqanimodii danbe oo ay taariikhduna ahayd 02/08/2006 waxay Falaadh-waliba kaabiga u soo istaagtay bartii bu’da u ahayd (halbawlaha). Qorsha dagaaleed ayay ciidanka gumaysiga Ethiopia iyaguna dajisteen oo ahayd shax shabagaysan, waxaana ciidanka wayaanuhu la soo daristay xaalad qalafsan oo walaac iyo wal-wal leh. Waxay mudo 12 saacadood gudohooda ku soo dajiyeen saraakiisha ciidankooda ee ku sugnaa xarunta gaaska kaliya ee Ogadenia wakhtigaasi joogay waa Qabridahare, in ciidankan JWXO shabag loo daadsado, in goobaha biyaha laga fadhiisto iyo in jihooyin badan lagaga yimaado. Qorshahani ay ciidamada wayaanuhu ka soo saareen xerada ay magaalada Qabridahar ku leeyihiin ee birgaydhka (Brigade), sahanka CWXO waa uu la socday, iskaba daa mida ay ku fakarayaane xitaa waxa uu fahamsanaa waxay ku riyoonayaan.
Cutubyadii CWXO ee fulinaya Hawlgalka Cirjiidh waxay ku adkaysteen (sidii Jabhad gobanimodoona caadkeed ahayd) in ay horay u socdaan oo ay fuliyaan hawlgalkan iyadoo aan ahayn xaalad dhagaraysan (maneuvering), oon looga leexanin ciidamada gumaysiga Ethiopia wadada ay damceen in looga tago. Wax walba waxay isugu geeyeen xitaa haday noqoto dagaal in aanu marnaba fashil ku dhamaanin hawlgalka Cirjiidh.
Inta badan ciidmada gumaysiga Ethiopia waxay salka ku hayeen biyaha deegaanka Goglo, oo in tabadan marka xili roobaadka la dabamaro ay dadku ku tirsanaadaan ceelasha. Hadana falaadh walba oo kamid ahaa CWXO ee Cirjiidh biyihu fadhigooda ayay ugu tageen, waana mid Ilaahay loogu mahadiyo iyo intii taakulaynta ciidanka ka qayb qaadatay taasoo muujinasa in halganka lagu xoraynayo Ogadenia yahay mid shacbi ah. Waxaa kaloo naloo sheegay ciidanka Wayaanaha tirada ay yihiin jihooyinka ay u haystaan qorshaha iyo waliba sida mooraalkoodu yahay. Waxaa ka mid ah arimaha xusuustayda ku xardhan sida shacabkii wakhtigasi ku sugnaa Tuulada Dhuure iyo nawaaxigeedu ay ugu tartamayeen sidii ay indhaha u soo saari lahaayeen ciidamadan Cirjiidh, xitaa maadan moodaynin in deegaanka cadaw rayidkan wax u dhimi karaa uu joogo. Markastoo aan amuurtan oo kale soo xasuusto waxaan garawsadaa hadalkii axmaarku uu ku yidhi Oday ka mida odayaasha Somalida Ogadneia ee ahaa; Saalladda Idaha iyo Mida riyaha Miyaad kala garanaysaa ee oo Odaygii ugu jawaabay maya, ka dib uu yidhi axmaarku danta aan kaleeyahay waa shacabkiina iyo jabahadiinuba waa sidas oo kale ka qoriga wada, midka taageeraha ah iyo kaan waxababa aan ogayni iskumid uunbaad noo tihiin.
N/Hurayaasha CWXO eenu wada joognay waxay laba kasta oo difaaca kuwada sugani wadaagayeen farxada, qosalka iyo sheekooyin goos-goos ah oo ay maskaxdayaydu soo cel-celinayso ilaa maanta. Cidwaliba oo aan soo marnaa waxay nawaydiinayasay in aanu u dhiibano weel ay caano noogu shubaan. Waxaan sidoo kale isha lasii raacayay marba masaf iyo weel kale oo ay shacabku ku wadaan raashin ama sonkor iyo badeecooyin lamida, oo meeshay ka soo gaadhaan fiilada ciidanka socda ee Cirjiidh ay ugu dhiibayeen. Waxay Ciidamada WXO ee hawlgalkasi Cirjiidh fuliyay intii ay ku jireen socdkan sii dhex-mushaaxayeen bulsha wayntaasi S/Ogadenia ee reer guuraaga ah ee deegaankaas ku dhaqan iyagoo abaabul, dhoola-tus, kawarqaadsho IWM ay dhex marayeen. Waxay sidoo kale hooyooyinka iyo gabdhaha S/Ogadenia ee ciidankaasi isha saarayay hal mar ah isku darayeen Mush-xarad (elalaas) iyo erayo ay kamid yihiin “Alle ha idin guuleeyo”, “Cadawgiina Alle ha jabiyo” iyo IWM oo ay nugu soo dhawaynayeen amaba ay nugku taageerayeen, midan oo ahayd midii aan ku soo bilawnay hawlgalkan. Waxaan hada ku joognaa faafka Qoraxay, sidoo kale culayska iyo socdkaba waxaanu ku ilaawaynay waa wajigii iyo farxadii diiranayd ee aan kala kulanay Bulshada S/Ogadenia.
Amin gaaban oo casar ah ayaanu ka hayaanay Tuulada Dhuure. Markaas anaga iyo ciidamada Wayaanuhu waxba isuma jirno. Xogtayada ah in aan deegaanka dhinac ka joogno waa ogyihiin anana waanu Ognahay goobaha ay fadhiyaan. Habeen labaadkii ciidankii aan kamidka ahaa oo fadhiya afkaBariee banka Qoraxay ayaa sahankii ciidanka JWXO waxa uu wakhti danbe u keenay xaalad ciidan oo dagdag ah. Waxay markiiba maamulkii ciidanku isugu yimaadeen kulan. Wada-tashi iyo falanqan dheer kadib waxaan go’aansanay in aanu dagaal lagalno, balse aanu anagu u doorano dagaalka meesha istaraatijiga noo ah ee dagaalka uu ka dhici doono. Markiiba raadka ayaanu u sii daynay say noo soo dabagalaan. Qorshuhuna waa in aanu u dhaqaajino dhanka iyo buuraha faafka ku yaal sida tuulada Xudur-ayle.
Amin habeenimo nisdambe ah ayaanu ku soo talawnay banka Qoraxay. Waxaanu soo galnay deegaanka ka bilaabma dhanka Galbeed ee Banka Qoraxay. Shaahii aroornimo ayaanu ku karsanay Deegaanka Dhuurta. Waxaa uu wardigii ciidanka oo kolba dib fiirinayay isagoo adeegsanayna qalabka loo isticmaalo fogaan araga (diirada) sifudud u arkayay ciidamda Wayaanaha ee raadkayaga ku soo taagan oo markii hore naloosheegay in ay ahaayeen ciidan dhan 400 oo askari. Laakiin qaabka ay noola socdeen ma’uusan ahayn cidaan weerar ah waxayse u ekaayeen ciidamo gaadmo doon ah. Isla wakhtigaasi waxaa nasoo dul istaagtay diyaarad ay ciidamada gumaysigu lahaan jireen oo fadhiyi jirtay garoonka Magaalada Qabaridahare nooceeduna ahaa Maanqaad, diyaaradan oo wax yar uun kadib hawlgalka Cirdhjiidh ay ku guulaysteen cutub katirsan ciidanka qalabka sida ee JWXO gaar ahaan qabyta Danab in ay ku gubaan garoonka Magaalada Qabridahar waxayna halkaasi ku dileen ciidan gaadhaya 17 askari. Diyaaradani waxay ku duulaysay joog inta badan aysan gaadhin hubka fudud ee gacanta laga rido. Waxa hub ah marido dayaaradda balse waxay si fudud ula socon kartay dhaq-dhaqaaqanaga iyo tiradanada. Markiiba waxaanu isu qaybiyay falaadho yaryar oo is hor iyo dababa maraya una socda qaab ciidan, waxaananu ku guulaysanay in aysan diyaaradani helin tiradayada saxda ah iyo in aanan socdka joojinin ilaa inta aanu ka gaadhayno goobta aanu rabnay.
Kadib markii aan ku guulaysanay in aanu gaadhno dhulka istaraatijiga ahaa ee duleedka tuulada Xudur ayle, gaar ahaan laagta Cadalay, waxay ciidamadii Wayaanah ee wakhtigaasi nagu soo raad taagnaa isu-rogeen oy aadeen dhanka tuula Maracaato. Sidoo kale waxay ciidan soo dageen tuulada Xudur ayle, ciidama kalna waxay soo dageen meel aan sidaasi nooga fogayn oo naga xigta dhanka Tuulada Wabiyar oo waqooyi markaasi naga ah.
La soco qaybta 3 aad ee Hawlgalkii Cirjiidh.
Qore iyo Goob-jooge:- Shamsadiin Cumer (TAKHAL).